Maitiro ekuverenga yako email pasina Google ine kuwana kwayo zvirimo | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuverenga yako email pasina Google ine kuwana kwayo zvirimo
Mune Nyaya yapfuura Ndakaudza maitiro andakawana kuti Google, kuburikidza neApple, yaive ichinyanyisa muhupenyu hwangu. Kubva amai vangu pavakaongorora mabhuku angu ezvinyorwa (kubva kuyunivhesiti) chimwe chinhu chakadai chakanga chisina kuitika kwandiri. Neraki, ndakafunga maitiro ekuisa miganho paGoogle.
Iwe unofanirwa kuve wakajeka nezve chinhu chimwe. Nzira chete iyo Google isingazive zvaunoita kusashandisa masevhisi eGoogle. Mune ino kesi Gmail.
Ini handigone kuvimbisa kuti mamwe masevhisi akaita seAptlook kana Yahoo haangasore, asi zvigadzirwa zvavo hazvina kusanganiswa seGoogle.
Mhinduro yakanyanya kunyanyisa maererano nekuvanzika, kushandisa yedu yega mail server, ichatitorera inopfuura chinyorwa chimwe saka tinochisiya kune imwe nguva. Parizvino tichagara mumhinduro dzepakati.
1 Disposable na
PaInternet pane zvakawanda zvinopihwa zvemahara zvemukati zvaunogona kuwana mukutsinhana nekupa yako email kero uye uchibvuma kunyorera kune avo matsamba. Disposable email services inobvumidza iwe kuti ugadzire iyo email kero iyo inongori neiyo pfupi nguva yehupenyu. Zvakwana kugamuchira dhawunorodha link.
Ehezve, vatengesi vedhijitari vakacherekedza izvo uye mazhinji emaemaipuratifomu anovharidzira anozivikanwa zvakanyanya mabasa eemail. Ndokusaka ini ndichishandisa uye ndichikurudzira TEMMAIL.
TEMPMAIL iri mumutauro wedu uye Izvo zvine mukana wekuti vachinje zita revhavha kazhinji (chii chiri kurudyi kweiyo) izvi zvinodzivirira epuratifomu yekushambadzira mapuratifomu kubva pakuivharira.
Paunopinda iyo peji email kero inogadzirwa. Pasina kusiya peji racho unoteedzera uye woishandisa mufomu rekunyoresa rinokufadza. Wobva wadzokera kune iyo TEMPMAIL peji uye vhura iyo email iyo yavakakutumira iwe sezvaunowanzoita.
Iri kero rinogona kushandiswa mune chero sevhisi inorikumbira chero bedzi iwe usingade kugamuchira kutaurirana nguva nenguva.
Pamusoro pewebhu, unogona kurodha kunyorera kweApple neIOS.
Kana iwe uchida email yekusingaperi kero, pane imwe yepakati imwe nzira pakati pekushandisa yekunze sevhisi uye kushandisa yako wega server. Inobhadharwa, asi haina kudhura kudaro.
Iwe unongofanirwa kuhaya webhu yekutambira chirongwa icho chinosanganisira iyo email sevhisi. Iwe uchafanirwa kunyoresa domeini uye hauzove nechengetedzo inokwanisa yeGmail (kunze kwekunge iwe uchiibhadharira). Nekudaro, iwe unenge uine mukana wekuve neyakakodzera kero.
Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti dura racho rine SSL chitupa. Zvikasadaro, iwe haugone kutumira maemail kune makuru server account. Nekudaro, kuiwana harisi dambudziko hombe. Mazhinji mawebhu anotambira vanopa anovapa emahara.
Rudzi rweakaunzi urwu runogona kuonekwa nechero email mutengi senge Thunderbird, kunyangwe mune dzimwe nguva zvingangoda manyorerwo echinyorwa. Kubata vanopa ivo zvakare vanokupa iwe kugona kuona maemail pawebhu. Nhau dzakanaka ndedzekuti vazhinji vavo vanoshandisa imwe yakavhurwa sosi imwe nzira kubata sevhisi.
Kana iwe uchida kuenderera mberi nekushandisa sevhisi yekunze pasina kurega kuvanzika, yakanaka sarudzo ndeye ProtonMail. Iyi sevhisi inonyora tsamba yekutumira pakati pechigadzirwa sosi uye sevha, iko iko kunochengetwawo kunyorwa. Muchiitiko chekuti iye anogamuchira zvakare iri ProtonMail account, inotumirwa nenzira iyi.
Iyo yekunyorera kiyi ndeyeye mushandisi. Izvi zvinoreva kune rumwe rutivi kuti ProtonMail haigone kuwana zvirimokana. Asi, kana iwe ukakanganwa password yako, warasikirwa nekuwana maemail ako.
Unoyeuka here Mission: Hazviite uye meseji dzayo dzakazviparadza? Pano isu tine chimwe chinhu chakafanana, kunyange chiri chaicho. Izvo zvinokwanisika kuseta nguva mushure meiyo meseji dzadzimwa kubva kubhokisi rekugashira zvisinei kuti yavo mail server ndeipi.
Iyo yemahara account ine inokwana mazana mashanu MB
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekuverenga yako email pasina Google ine kuwana kwayo zvirimo
Mhoroi, maita basa kwazvo nechinyorwa uye neruzivo, zvinonyanya kubatsira.
Nenzira, ini ndinotaura imwe sarudzo yandinofunga inokodzera chinyorwa chakasiyana pane ino saiti:
https://f-droid.org/en/packages/com.b44t.messenger/ (pane F-Droid)
Chaizvoizvo, iri email mutengi asi iine zvinhu zvitatu zvakakosha:
1. software yemahara
2. imomo inonyora maemail ekupedzisira-kumagumo otomatiki
3. Ine dhizaini yakafanana newa WA (uye yakangofanana kana nyore kushandisa)
Inoshanda zvakakwana, uye haitombogadzirisike neakaundi account, uye inokutendera kuti utaure nenzira yakachengetedzeka uye yakavharidzirwa uchishandisa chero server tsamba seyakavakirwa.
Zvinotaridza kwandiri kuti ndiyo imwe nzira yakanaka mukati meinosimudzwa nekatsamba.
Kwazisai uye mhanza!
"Zvikumbiro zveGNOME", saiti nyowani kushambadza maappurojekiti eprojekiti
\_ SPEK.TAKL \_ Yakarambidzwa Edition - Psychological Horror Vhidhiyo Game